Soosaarka dalagga | January 2020
Phacelia - waa mid gaar ah
Phacelia waxaa iska leh qoyska biyaha (hydrophilic) waana warshad sannadle ah oo hal-jarjaran ah. Phacelia waxaa loo tixgeliyaa inay tahay digada cagaaran ee ugu fiican, iyo sidoo kale dhaqanka cagaarka ah iyo dhaqanka malab. Phacelia waxay u qalantaa dareen gaar ah sababtoo ah koritaankeeda aad u deg deg ah, taas oo keenta tiro badan oo cagaaran.
Daqliga Biegrass (Dhicis)
Ryegrass Grazing, oo sidoo kale loo yaqaano ryegrass ingiriisiga iyo Chennennial perennial Chaff, waa warshad caleen ah oo ka tirsan caleemaha ubax ee Chaff, taas oo, marka, ka mid ah qoyska of badarka. Qalabkan geedi-socodka noolaha ah wuxuu ku nool yahay Yurub, Waqooyiga Afrika iyo Galbeedka Aasiya. Mararka qaarkood, haddii aan la yaab lahayn, ryegrass dilka ah waxaa laga heli karaa gobollada Aasiyada Aasiya, oo xaq u leh Galbeedka Siberiya.
Goynta Grass (Galega) - waxaa loola jeedaa caleenta dhirta waaweyn ee dhirta badan oo dhirta ka mid ah oo ka mid ah qoyska legume. Waxa kale oo jira magacyo kale oo roodhida ah, sida rutevka, rue rue, forester. Waxaa jira noocyo kala duwan oo caano ah ariga - Oriental iyo daaweyn. Inta badan xiiso leh waa wax soo saarka riyaha oriental, sababtoo ah waxay u adeegtaa sida dalagga wanaagsan ee dalagga.
Waxaan koraan hibiscus beerta
Hibiscus waa warshad reer Malvaceae ah. Waxaa aad u jecel yahay growers, maxaa yeelay dhammaan noocyada kala duwan ee warshad this Bloom aad u quruxsan. Ubaxyada Hibiscus, xataa gudaha noocyada isku midka ah, waa mid kala duwan. In ka badan 200 nooc iyo qiyaastii 500 nooc oo warshadaan ah ayaa loo yaqaan. Ma taqaanaa? Muuqaalka muuqaalka ah ee dhammaan hibiscus - nolosha gaaban ee ubaxa.
Sida loo isticmaalo Baikal EM-1 goobtaada
Diyaargarow-tiknoolajiyada EM-waxay soo gashay taariikhda qoyskeeda sida bacriminta nool. Taariikhda abuuritaanka Bacriminta noocan oo kale ah waxaa laga hayn karaa waqtiga Fircooniga Masar. Laakiin natiijooyinka dhabta ah, ee helay aqoonsi caalami ah, ayaa ka soo baxay 1988. Xirfadlaha Japan Teruo Khiga wuxuu abuuray daroogo adag oo bakteeriya u adkeysata si uu u quudiyo lakabka ciidda ee bacrinimada ah wuxuuna ugu yeeray sheyga EM - wax ku ool ah.
Waa maxay noocyada clematis ah
Clematis wuxuu awood u leeyahay in uu la yaabo oo jilicsanaado qof kasta oo leh cagaaran casiir leh, ubaxyada quruxda badan, qaabab kala duwan, midabka aan caadiga ahayn, urta jilicsan. Qofka degan hoosta ayaa si wacan uula qabsada Yurub wuxuuna leeyahay in ka badan 300 nooc. Ubax mucjiso ah, sida cawska, qurxin cawskaaga, xardho geela leh geed canab ah ama geed si ay ugu koraan balakoonka.
Meelaha muhiimka ah ee muhiimka ah, isticmaalka geedo ujeedo daaweyn
Marar badan marka lagu socdo xadiiqooyinka iyo xayiraadda kaynta, waxaanu dareenka u saarnaa cawska aan ku soconno. Laakiin inta badan geedi-socodka ayaa noqon kara, haddii aanay ahayn badbaado, ka dibna gargaar la taaban karo iyo gargaar daaweynta cudurka. Fikrad caan ah: qaab-dhismeedka muuqaal caan ah waa uun dukaamada dabiiciga ah. Waxay ka kooban tahay oxalic, acetic, xannibaad, malic, glyceric, fumaric, acids iyo succinic acids.
Wisteria ayaa laga yaabaa in ay tahay warshadda ugu quruxda badan dhulka. Yaa ku raaxeystay ugu yaraan hal mar nolosha si uu u fikiro ubaxiisa oo uu dareemo caraf udgoonkiisa gaarka ah, wuxuu maskaxda ku hayaan daqiiqaddan cajiibka ah ee nolosha. Duufaannada ugu quruxda badan ee dabiiciga ah ee wisteria waxay gaari karaan ilaa nus mitir, waxay ku daboolaan warshadaha xayawaannada jilicsan, oo hal dhinac oo iyaga ka muuqda waxay u muuqataa in ay hoos u dhacday sheeko cirfiid ah.
Waa maxay tarragon faa'iido leh, isticmaalka daaweynta?
Hooyooyinka intooda badani waxay xiiseynayaan waxa tarjunka ah iyo ujeedada loo isticmaalo. Warshadkan waxaa sidoo kale loo yaqaan "Tarkhun-cawska", waxaana ka mid ah caleenta cagaaran. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sifooyinka faa'iido leh ee warshadda, iyo sidoo kale ku saabsan cudurrada la daaweyn karo iyadoo laga caawinayo geedkan cajiibka ah. Waxyaabaha kiimikada ee tarragon Qaybta kiimikada ee warshaduhu waxay ka caawisaa in ay fahmaan meelaha ay ka mid yihiin iyo kuwa cudurada loo isticmaali karo.
Waa maxay sababta aan ubaxday forsytsiya, khaladaadka ugu weyn ee daryeelka ee baadiyaha
Forsythia (magac kale waa Forsytia) waa geed qurux badan oo qurxoon, oo matalaya qoyska olive, oo abuuri doona dareen cajiib ah oo diirimaad ah iyo guga maalmaha ugu horeeya diiran. Dhirta qorraxda-cadceedu ma aha oo kaliya hagaajinta muuqaalka qurxinta beertaada, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi doontaa indho cad oo ka dhexjirta dhammaan dadkaas.
Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelidda istiraatijiyeynta
Enotera waa ubax dilka ah kaas oo loo yaqaan magaceeda dhexe, kuwaas oo ah: "habeenkii hore" ama "shumac fiidkii". Warshadu waxay u qalmaan magacyada noocaas oo ay sabab u tahay midabkeeda dahabka ah ee burooyinkeeda iyo ubaxyada badan ee habeenkii. Ma taqaanaa? Cudurka enotera waxaa ka mid ah tiro badan oo ah sanadlaha, biennial iyo dhirta dhirta dilka ah.
Tarragon: xulashada noocyada ugu caansan
Qoyska saaxiibka ah ayaa wakiil ka ah ururinta guryaha ee beeralayda ubaxyada iyo beeraleyda by dhirta dheer-cagaaran ee tarragon (tarragon), kaas oo Blooms in August-September oo leh cirro huruud ah (inta badan) ubax. Waxay u dhacdaa inay noqoto mid caan ah oo aan ur u lahayn. Aztec Aztec waxaa ku waajib ah magaca magaca asal ahaan ka yimid Mexico. Xoogaa iyo caleemo adag.
Qalabka daawada ee stonecrop ka badan yahay faa'iido leh "kaabash carrada"
Warshad dilka ah, oo leh caleemo fareem ah iyo inflorescences guduudan, waxay leedahay magacyo badan (kaabajka hareeraha, xargaha, dhagxaanta madoow) iyo caan ku ah sifooyinka bogsashada. Caleenta dhirta waxaa ku jira 600 oo nooc, kuwaas oo ah jiilaalka-adag iyo kulaylaha kulaylaha, kulaylka iyo go'doomin.
Sida loo koro tarragon beertaada
Tarragon waa warshad dilka ah, mid ka mid ah noocyada dixirka. Ma taqaanaa? Tani waa noocyada kali-geedka ee kaliya ee aan haysan dabeecadda qadhaadh ee dabiiciga ah ee dhirtaas. Dhererka wuxuu ku kori karaa ilaa hal mitir iyo badh, caleemuhu waa cidhiidhi yihiin, ubaxyada cagaaran-cagaaran, nooca barafka-cad, oo ku yaalla dhinaca darafyada.
Thuja waa mid ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee dhirta cagaarka ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qorsheynta qaabka muuqaalka. Aboorka quruxda badan ee dhirta ayaa ah mid aan la qabin oo daryeel ah oo leh hanti waxtar leh si loo soo saaro walxaha firfircoon ee hawada - phytoncides. Tani waa waxa beeraleyda qurxan ee cagaaran iyo dadka degaanka xagaaga, kuwaas oo yaqaan sida loo koro thuja, waxay ku dhacdey jacayl.
Noocyada dhaxan ee loo yaqaan 'frost-resistantant' ee ta gobolka thuja oo leh sharaxaad iyo sawir
Thuja galbeed waa dhir diiran oo dhir udgoon. Shimbiraha dulqaadka leh, baraf u adkaysta, waxaa jira geedo iyo geedo yaryar oo Yurub ah, waxaa laga keenaa Waqooyiga Ameerika. Markii hore wuxuu ku noolaa bangiyada wabiyada iyo tuulooyinka, oo aan hoos u dhigin daryeelka. Sidaa darteed, waxaa aad u caan ah beerta qurxinta. Thuja galbeedka waxay leedahay noocyo farabadan, ka hor intaanad dooran mid ka mid ah kuwa aad xiiseyneyso, waxaad u baahan tahay inaad ogaato muuqaalada.
Noocyada iyo noocyada beerta cawska
Noocyada dhirta qoryaha ayaa si aad ah isugu kala duwan - xitaa saynisyahannadu si sax ah uma xisaabi karaan lambarkooda, waxay tiriyaan lambarrada 12 ilaa 25 waxayna horseedi karaan dood tartiib tartiib ah: kaas oo qoyska ama caanaha lagu darayo tan ama noocyadaas. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan noocyada dhirta qoryaha laga bilaabo taariikhda hore ayaa waxaa isticmaala nin. Warshadani waxay ku raaxeeysataa jacaylka ninka, maxaa yeelay waxay leedahay: qoryaha jilicsan iyo iftiin leh waxyaabo sarreeya (badeecada qoryaha ayaa si fiican loo ilaalin karaa qarniyo); Guryaha fungicidal (fangaska iyo sheyga kale ee ka hortagga dhirta); caraf udgoon (foox laga sameeyey tar); tayada daaweynta; quruxda iyo qurxinta.
Talooyinka ugu sarreeya ee ku saabsan daryeelka dibadda
Calla ayaa had iyo jeer soo jiidatay nooc aan caadi aheyn oo ah foorisho, muuqaal qurux badan iyo caro aan caadi ahayn. Laakiin beeralayda ubaxa waxay jecel yihiin xaqiiqda ah in ubaxa si fudud loo kori karo labada beerta iyo dheriga guriga. Mid kasta oo ka mid ah kiisaskaas, calla waa warshad aan qarsoodi lahayn. Xeebeedka callas ee beerta guga: Beerto ee callas ee dhulka u furan waxaa lagu fuliyaa oo keliya guga.
Sababaha la'aanta ubax ee callas, cudurada iyo cayayaanka ee ubaxa
Gacanta dhirta, codka quruxda badan ee quruxda badan. Ubax ee dhirta this waa mid aad u qurux badan oo qarsoodi ah. In kasta oo xaqiiqda ah in daryeelka callae uusan u baahnayn dadaal badan, waxaa jira tiro badan oo cuduro kuwaas oo horseedi kara maqnaanshaha ubax ama dhimasho geedka. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ku baran doontaa sababta dhibaatooyinka noocan oo kale ah iyo waxa ay yihiin tallaabooyinka lagula dagaallamo cudurrada callas.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato inaad kor u qaaddo gabbaldayaha: Talooyin wax ku ool ah ee cusub
Helianthum (oo ka timid Giriigga Helios - qorraxda iyo anthos - ubax), Ruush - gabbaldayaha, waa dhir aad u qurux badan oo qurux badan, oo casaan ah, casaan, casaan ama caddaan ah, taas, iyada oo ay sabab u tahay unpretentiousness iyo koritaan degdeg ah, waxay awoodaan inay qurxiyaan wixii fasax ah sawir. Waa buro kobcin ah ilaa 30 cm oo dheer oo leh caleemo qoyan oo cagaaran ama madow ah.